Rakkoo nageenya Oromiyaa keessaa balaaleffachuuf hawaasni Oromoo Waashingitan DCtti hiriira mormii gaggeessan - BBC News Afaan Oromoo
25 Amajjii 2020
Image copyright Tashoomaa Diimee
Goodayyaa suuraa Hawaasni Oromoo Waashingitan DC fi naannoo ishee jiraatan rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessaa balaaleffachuuf hirira bahan
Rakkoo nageenyaa Lixa Oromiyaa godinaalee Wallagaa fi Kibbaan ammoo Gujii keessatti mul'atu balaaleffachuuf, hawaasni Oromoo Amerikaa, kutaa biyyaa Waashingitan DC fi naannawaa jiraatan dhaabbilee mootummaa Ameerikaa fuulduratti mormii dhageessisan.
Godinaaleen Wallaggaa bulchiinsa komaandi postii jalatti buluu erga jalqabanii waggaan tokko darbeera.
Dabalataan dhiyeenya kana ammoo tajaajilli interneetii godinaalee wallaggaa bakka garaagaraa keessatti addaan citeera. Tajaajilli bilbilaas adda cituun ammoo maatiin bakka jiru irraa akka wal hin iyyaaffannee fi yaaddoo keessa akka jiraatan isaan taasisuu namootni BBC'n dubbisee ture himaniiru.
Hiriirri mormii kaleessa Waashingitan DC masaraa mootummaa Ameerikaa 'White House', Baankii Addunyaa fi IMF; akkasumas Minsiteera Hajaa Alaa 'State Department' fuulduratti gaggeeffames gochaa kana balaaleffachuufi komandi poostiin Oromiyaa keessaa akka bahu gaafachuuf jedhan qindeessaan hiriirichaa Obbo Tolchaa Wagii.
Oomishtoonni bunaa lixa Oromiyaa maal keessa jiru?
Boordii hawaasa Oromoo bakka bu'uun hojjechaa akka turan kan himan Obbo Tolchaan, tajaajilli interneetii Wallaga irraa adda cituun sagaleen isaanii akka hin dhagahamne ukkaamsuudha jedhan.
''Waraanni mootummaa naannichatti bobba'e nama ajjeesaa turuuf ragaa gutuu dhiyeessuu dandeenya,'' jedhu.
Mormii keenya mootummaan Itoophiyaas beekee rakkoo uummanni keessa jiru kana hiikuu qaba jenneeti mormii keenya dhageessisuuf kan murteessine jedhan.
Goodayyaa suuraa Mormii rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa balaaleffachuuf DCtti bahame.
Namni biraan dubbisne jiraataa Meeriilaandi kan tahe Obbo Tashomaa Diimee, uummatni keenya yeroo dheeraaf qabsoo keessa ture jedhan.
Haa tahu malee waggoota lamaan kana jijjiiramni ni dhufa jennee eegaa turrus waanti isa duraan ture irraa addatti uummata Oromoof jijjirame hin jiru jedhan.
Isa duraa caalaa uummatni keenya ajjeefamaa fi hidhamaa jira jechuun komata.
Ummatni ammayuu dararamaa jira jechuun komaandi postii fi tajaajilli interneetii fi bilbilaa godinaalee Wallaggaa irraa addaan cites akka sirratuuf sagalee keenya dhageessisaa turre jedhan.
Qindeessaan hiriirichaa Obbo Tolchaan Baankiin Adunuyaa, IMF fi Waayit Haawus maaliif filataman gaaffii jedhuuf maallaqaa isaan deeggarantu meeshaa waraanaa uummatni keenya ittiin du'u bita waan taheef akka beekaniifi jedhan.
Itoophiyaan Baankii Addunyaafi IMF irraa maallaqa deeggarsaa gara doolaara biliyoona shanii argatte, diinagdee biyya keessaa haaromsuu fi guddisuuf akka itti fayyadamtu ibsitee ture.
MM Abiy Ahmad akkuma aangootti bahaniin osoo hin turiin gara Ameerikaatti imaluun, lammiilee Itoophiyaa biyyicha jiraatan waliin mari'atanii ture.
Yeroo sanas simannaa guddaan akka taasifamee fi diyaasporaan diinagdee biyyaa jajjabeessuu keessattis shoora isaanii akka bahatan taasisuuf hojjetaa turan.
Haa tahu malee waggaa tokkoon booda haalli nageenyaa godinaalee Oromiyaa tokko tokko keessatti mudataa jiru akka mormiin isaan mudatu taasisaa jira.
Humna Waraanaa Bilisummaa Oromoo jedhamu kan Marroo Dirribaan hogganamuu fi waraana mootummaa gidduutti yeroo baay'ee dhukaasni gaggeeffamaa akka ture jiraattotni ni himu.
Rakkoon kun hammaachaa adeemuun gama lamaan miidhamaa akka jiran jiraattotni komii qaban dhiyeessaa turan.
Namootni nagaan hojii guyyuu hojjetatanii jiraatanii fi qondaaltotni mootummaas Lixa Oromiyaa bakka garaagaraatti ajjeefamaa akka turan ni himama.
Yeroo dhiyoon as ammoo mootummaan Lixa Oromiyaa godinaalee wallaggaa bakkeewwan garaagaraa keessaa tajaajila interneetii fi bilbilaa cufuun komii guddaa kaaseera.
Filannoo Biyyaalessaa bara kana gaggeeffamuuf haalli bulchiinsa komaandi postii kun mijataa miti jedhan xiinxaltootni siyaasaa dubbisne.
Jiraattotni bilisa tahanii akka sagalee isaanii hin kennineefi duula na filadhaa gaggeessuufif rakkoo tahuu danda'a kan jedhe ogeessa seeraa fi siyaasa Itoophiyaa kan xiinxalu Dr Heenook Gabbisaati.
Dr Alamuu Simee marii paartileen siyaasaa guyyaa filannoo ilaachisuun boordii filannoo waliin gaggeessan irratti komaandi postiin rakkoo akka hin uumneefi haaluma amma jiruun akka itti fufu himanii ture.
Lixa Oromiyaa: Oomishtoonni bunaa 'Komaandi Postii' jala jiran hojjetachuu dadhabne jedhu
Lixa Oromiyaa: Obbo Taayyee Danda'aa waa'ee nageenya Lixa Oromiyaarratti maal jedhan?
Qondaalli nageenyaa magaalaa Buraayyuu ajjeefaman